GREATPOOL inopa huwandu hwakasiyana hwekubvunza masevhisi nerubatsiro rwakakwana rwekugadzira, dhizaini yemidziyo yekugovera uye kuvaka kwehunyanzvi rubatsiro. Chikwata chedu chine ruzivo chinotitendera kuti tipe mhinduro yakazara padhizaini dhizaini, kuvaka, post-kuvaka, kuisirwa kwemidziyo uye kugadzirisa kwekuita, kubhidha kweprojekiti uye pre-dhizaini masevhisi.
Taura neGREATPOOL nezve Zvaunoda
Inopa rubatsiro mukusarudzwa kwemidziyo uye masisitimu anopindirana kune yako pool purojekiti
Swimming Pools kuvaka technical support
Kusarudza madhizaini akakodzera, masisitimu uye nzira dzekuvaka ndizvo zvatingaite iwe purojekiti yedziva!
Yakagadzirirwa kupedzisa dziva mhinduro yako
Kana ukasarudza GREATPOOL,Mazano ako uye zvibodzwa ndiyo poindi iyo timu yedu ichashanda kubva.
Kwemakore makumi maviri nemashanu apfuura, takaunganidza ruzivo rwakapfuma mukugadzira midziyo yekutuhwina uye ruzivo rwehunyanzvi mumapurojekiti ekutuhwina. Zvinoenderana nedhizaini yedhizaini yedhizaini yaunotumira, isu tinopa imwe-yekumira mhinduro ye-yakadzama dhizaini yedziva rekushambira, midziyo inotsigira uye kuisirwa kwehunyanzvi. Rega iwe Zvinyore uye zvinobudirira kuvaka madziva ekutuhwina ane masons, maplumbers, nezvimwewo, uku uchideredza mari yekuvaka dziva rekushambira.
Matanho Ekuita A Pool Service
STEP 1: Tumira dhizaini yako yedhizaini kwatiri
Kuchinjana kwemazano kwakakosha.mhinduro dzako dzichatigonesa kuziva zvaunoda uye zvishuwo zvako zvepurojekiti yako yedhamu.
Tinokukumbira kuti utitumire chirongwa chesaiti, pamwe chete nemifananidzo yesaiti uye maonero enyika neimba. Kutevera izvi, tinokutumira iwe yakadzama chikumbiro chekushandira pamwe neyedu mubhadharo quote.
CHECHI 2: Tichakugadzirira madhiri emadziva ane hukama
Pipeline embedding mifananidzo
Paurongwa hwepasi hwedziva rekutuhwina, tinozotara zvishongedzo zvakasiyana-siyana zvedziva rekutuhwina uye marongero akasiyana epombi ekamuri yemuchina zvakadzama.
Equipment kamuri marongerwo
Uyu ndiwo musimboti wekuiswa kwako. Iyo yekumisikidza dhizaini yakagadzirwa zvinoenderana nehukuru chaihwo hwekamuri yemuchina inoratidza mapaipi ese, mavharuvhu anodiwa uye michina mukamuri yemuchina. Mavharuvhu anodiwa anopiwa uye nzvimbo dzadzo dzakanyatsoiswa chiratidzo. Plumbers dzinongoda kuita kuvaka uye kuisa zvinoenderana nedhizaini yedhizaini.
Kunyangwe isu tichipa yekutanga dhizaini kana kushanda nemazano aripo, GREATPOOL inopa kuenderera kusati kwamboitika kwesevhisi, iyo inochengetedza nguva yako nemari.
CHECHITATU: Tinogona kupa rondedzero yezvinhu zvemidziyo uye makotesheni
Pool midziyo kugadzirisa
Pamamiriro ezvinhu chaiwo edunhu rega rega, isu tinopa runyoro rwemidziyo inonyanya kuenderana nenzvimbo yenzvimbo uye yakavakirwa pakuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, kuchengetedza simba, uye mutengo-kubudirira.
Isu tiri vagadziri vemidziyo uye tine mukana wemutengo wezvigadzirwa zvemhando yepamusoro izvo vasina makondirakiti emuno.
STEP4: Tinogona kukupa kuvaka nekuisa hunyanzvi hwekutungamira
Chikwata chedu chine maneja emapurojekiti ane anopfuura makore gumi nemasere eruzivo rwekuvaka yekutevera chirongwa ichi uye nekupa hunyanzvi hwekutungamira
FAQ nezvesevhisi yekutuhwina
Sei uchitsvaga rubatsiro rweGreat pool?
Isu tinogovana hunyanzvi hwedu nevatengi vedu, zvakasanganiswa nemidziyo yepamusoro uye tekinoroji muindasitiri yekutuhwina. Aya ndiwo makore edu makumi maviri nemashanu echiitiko muindasitiri yekutuhwina. Pamusoro pezvo, dhizaini yepurogiramu yatinopa inogona kuita kuti vashandi pasi rese vanzwisise zviri nyore uye nekuishandisa zvakananga. Tinotenda kuti muchakoshesa mhinduro yedu.
Chii chaunoda kufungidzira mutengo wako?
Mushure mekutanga kuonana, tinokukumbira kuti utitumire topographic mepu yechirongwa uye, kana zvichibvira, mapikicha enzvimbo yeimba yako, nzvimbo uye dziva nzvimbo. Iwe zvakare unofanirwa kusimbisa iyo inodiwa dziva saizi nekudzika uye sarudzo dzaunoda. Mukati memaawa makumi manomwe nemaviri, tichakutumira email inotsanangura basa rega rega uye huwandu hwemari yedu.
Ndeapi masevhisi atinogona kupa?
Tinogona kupa dziva dhizaini dhizaini, dziva midziyo kupa, kugadzwa hwokugadzira nhungamiro.
Unofanira kugamuchira masevhisi edu ese here?
Kwete. Basa redu: dhizaini dhizaini. Equipment list. Kuiswa Unyanzvi kutungamira. Zvinoenderana nezvido zvako, iwe unogona kusarudza inodiwa iwe wega.
Zvinotora nguva yakareba sei kuti upedze kugadzira?
Izvi hazvo zvinoenderana nebasa redu, asi avhareji yenguva ndeye 10 kusvika mazuva makumi maviri mushure mekunge tawana mvumo yako yechirongwa chepfungwa.
Kana chirongwa chepurogiramu chichigutsikana, chii chandinofanira kuita zvinotevera?
Madhizaini edu anodhirowa anotendera iwe kuti uvake madziva ekutuhwina wega kana nenyanzvi. Asi kana iwe uchida, timu yedu tekinoroji timu inogona zvakare kuenda kune saiti kutungamira kuisirwa kwemidziyo.
ndinotenga kupi midziyo nezvinhu?
Zvinoenderana nedhirowa yedu, isu tinokupa iwe runyorwa rwesefa zvinhu uye michina. Panguva imwecheteyo, tichakupa quotation yemidziyo yedu. Unogonawo kuzvitenga munharaunda. Sarudzo ndeyako
sei kuwana vashandi?
Tinogona kubatsira kuonana nevashandi vekwaunogara, kuvakumbira quotation zvinoenderana nehurongwa hwekugadzira, uye kutumira mazano avo kwauri mushure mekutarisa quotation. Asi sarudzo yekupedzisira ndeyako.
Infinity Edge Swimming Pool, Kunze Swimming Pool Solution, Swimming Pool Service, Public Swimming Pool Solution, Swimming Pool Company, Swimming Pool Project,